Maxaabiista ku jirta Xabsiga Dhexe oo ku sii fidaya cudurka shuban biyoodka – idalenews.com
Xaalada caafimaad ee maxaabiista ku jirta Xabsiga dhexe ee Xamar ayaa laga deyrinayaa, iyadoo 5-maalmood ee la soo dhaafay uu soo ritay ilaa 22-ruux, halka 2 ka mid ah ay u geeriyoodeen.
Taliska Xabsiga dhexe ayaa ka deyriyay xaalada caafimaad ee maxaabiista, iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa uu ku sii fidayo cudurka shuban biyood,a maadaama nadaafad dari aad u baahsan uu ka jiro Xabsiga.
Qolalka Xabsiga iyo Musqusha ayaa ah kuwo ay isku dhex yaalaan, waxaana halkii qol ku jira ilaa 50-maxbuus, iyadoo nadaafaduna ay tahay mid aad u liidata.
Taliyaha Xabsiga dhexe Maxamuud Xuseen Axmed ayaa sheegay in ilaa iyo hada labo maxbuus ay u geeriyoodeen, halka labaatan kalena ay la il daran yihiin cudurka shuban biyoodka sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa uu sheegay inay soo gaareen daawooyin caafimaad oo ay u keeneen Wasaarada Caafimaadka iyo Hey’ado kale oo caafimaad, isagoo tilmaamay in hada xaalada ay tahay mid soo hagaageysa.
Xilligan oo lagu jiro kuleylaha ayaa aalaaba waxaa ka dilaaca gobolada dalka qaar cudurka shuban biyoodka, iyadoo loo aaneeyo nadaafad darada iyo wasaqda, waxaana maalmihii u dambeeyay hadal heynta aheyd in Xabsiga dhexe oo ay ku jiraan Maxaabiis fara badan uu ka dilaaco shuban biyood.